Museum of St. Francis (Santiago), Tranombak'i St. Francis - Santiago
Adiresy: Av Libertador Bernardo O'Higgins 834, Santiago Centro, Santiago;
Ny tranonkala ofisialy: www.sfmission.org;
Nosoratana: tamin'ny 1969;
Phone: +56 2 2639 8737;
Ny tranombakoka dia miasa amin'ny Alatsinainy ka hatramin'ny zoma - 9:30 -13: 30 / hatramin'ny 15:00 hatramin'ny 18:00, amin'ny faran'ny herinandro hatramin'ny 10:00 hatramin'ny 14:00.
Afaka mahita sy mifankahalala amin'ny kolontsaina Shiliana ianao raha mitsidika ny mari-pahaizan'i Santiago . Anisan'izany ny Museum of St. Francis, izay ahitana fiangonana sy monastera. Ankoatra ny fanangonana, izay voatahiry ao amin'ny tsinain'ny tranombakoka, ny tranobe, tahaka ireo trano hafa, dia ohatra iray miavaka amin'ny haavon'ny taonjato faha-16.
Ao Santiago , sy manerana an'i Chili , io no hany tranombakoka kolonialina izay ahitana karazana zavamaniry mahagaga. Eo anatrehan'ny mpitsidika dia vokatra avy amin'ny fiangonana izay tsy ho hitanao ary tsy ho hita any amin'ny firenen-kafa. Ny fanangonana manontolo dia misy ny vilia baolina volafotsy, lamba fanamiana sy sary hosodoko tamin'ny taonjato faha-17.
Ny maha-tokana ny tranom-bakoka
Nosoratana tamin'ny 1969 ny Tranombakoka St. Francis. Ny trano niorenany dia novelabelarina imbetsaka, satria horohoron-tany mahery no nanimba azy io.
Ny fidirana ao amin'ny tranombakoka dia eo akaikin'ny fidirana amin'ny fiangonan'i Md Francis. Tamin'ny voalohany dia sarotra ny mino ny harenan'ny vahoaka Shiliana izay mitoetra ao ambadiky ny rindrina fotsy sy tsotra. Ambonin'ny fidirana dia ny endrik'i Md Francis of Assisi, ny hafa dia tsy nomen'ny architects.
Ny totalin'ny tranombakoka dia misy efitra fito, izay misy ny fampiratiana. Ny famoriam-bola lehibe dia manana efitrano malalaka. Ho an'ny fampirantiana vonjimaika dia misy toerana malalaka.
Amin'izao fotoana izao, ny karazana fivavahana sy kolonialy samihafa dia tazonina eto. Ny "fampisehoana" fototra, izay mipoitra manokana, dia sary ahitana sary hosodoko ahitana an'i Francis of Assisi. Ny sary lehibe dia manintona ny sain'ireo mpizahatany sy mpivavaka. Mahavariana sy be dia be - ny sary hosodoko rehetra 54 izay hodinihina amin'ny antsipiriany ao anatin'ny ora roa dia tsy miasa.
Eto, ao amin'ny Museum of St. Francis, misy fampirantiana kely iray, izay nosokafana ho fanomezam-boninahitra an'ilay poeta Gabriela Mistral malaza Shiliana. Raha heveriny fa nahazo ny loka Nobel izy tamin'ny taona 1945, dia ny vahoaka Chileana no mitondra azy amim-panajana.
Ny hahatongavana any amin'ny tranombakoka dia ho mora ho an'ireo izay efa nandalo tao afovoan-tanànan'i Santiago . Ilay trano dia eo akaikin'ny lapa ao La Moneda . Azonao atao ny manatratra azy amin'ny metro metro eo amin'ny fiantsonan'i Santa Lucia, ary mandeha fotsiny. Na hitondra bisy, mijanòna izay eny an-dalam-be.
Tranom-bitsika mitahiry divay
Fanamboamboaran-damba amin'ny marin-dranomasina
Vehivavy Nikeky Aircams
Fitrandrahana Fireplace vita amin'ny polyurethane
Sary 32 mandrisika anao hahafantatra ny fotoana hijanonana
Zoo ao Dubai
Karakarao ny trompetra trondro
Boots Leather Summer
Diovina mandritra ny telo andro
Ahoana no hanafoanana ny reraka?
Ny fampakaram-bady amin'ny fomba "fitiavana"
Fanamboarana rindrina misy ravin'akora
D-dimer amin'ny fitondrana vohoka